5 Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como
Bal qiyaas hoos fadhiya inay ku raaxaystaan ​​kafeega subaxdii aad ku sugnaan naqshadaha dhaqanka Talyaani halka raadinayaa at biyo buluug dhalaalayay oo buuraha cagaaran luscious. Iyada oo ay tani u muuqan yaabaa in sida kaliya riyo, waa mid dhab ah in kuwa booqo cajiib Lake Como. Tani caga cajiib ah fadhiya liiska dadka safarka badan. Waxa uu xitaa ka dhigtay waddadiisa gal screen lacag la hits Hollywood iyo filimada shisheeye! Lake Como been geeska waqooyi-galbeed ee Italy, xaq u socda si ay u Swiss Alps. Xeebta tan cajiib yaab dabiiciga ah waa magaalooyin badan oo la hubo inay yaaban yihiin. Si kastaba ha ahaatee, goosashada kuwa booqashada noqon kartaa shaqo dhib haddii aad tahay jadwalka dhagan. Haddii aad u gaaban yihiin waqtiga ay doonayaan inay ka soo inta badan aad safar, halkan waa 5 magaalooyinka picturesque booqashada on Lake Como.
1. Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como: sida
Magaalada Como waa badan tahay in ugu booqday of magaalooyinka oo dhan ee aagga sababta oo ah tareenka. Waa dhibic-upka kooxda martida badan oo tan iyo markii a tareen kortaan waa habka ugu fiican oo ugu fudud in ay gaaraan Como. Iyadoo qaar ka mid ah waxa ay ka fiirsan stop gaaban ee ay safarka ee booqashada iyo la kulma inta kale ee Como, qaar kale waxa ay u arkaan qayb muhiim ah oo waayo-aragnimo ah. Sababta ayaa dareen isku waxaa sabab u ah dadka magaalada. Waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee u dhow yahay, iyo waxa uu si buuxda u duubay ay racfaan dalxiiska. Dadka qaar this jecel oo ay qaataan waqti ay la Tagnana oo dhan indhaha iyo soo jiidashada dalxiiska of this magaalada qurux badan. Si kastaba ha ahaatee, dadka kale rabto in aad hesho in magaalooyinka yar yar in ay la kulmaan waxa ay ka fiirsan magaalooyinka Talyaani Sucuudiga oo dhab ah.
Iyadoo qaar ka mid ah dalxiisayaasha ka fiirsan Como dabin dalxiis, waxay u muuqdaan in ay iska eafiya iskana quruxda asalka ah ee magaalada this qadiimiga ah. Waxaad toddobaadka oo dhan ka isticmaali karto sahaminta Como oo weli wax in ay ka baqaa. Dhab ahaan, badan oo dalxiisayaal ah in dhici jacayl leh magaalada qaataan waqti ay ku socdaan magaalada dhex mara. Waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah meheradaha iyo makhaayadaha loogu talagalay soo qulqulaya dalxiisayaasha. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaa jira GEMS qarsoon. Goobaha sida Silk Museum, ah 15cathedral qarnigii th, ah la iskula dhexmaro Pretoria iyo xarunta Dr Makumbe sugi nafihii more adventurous.
Florence si Tareenadu Como
Milan in ay Tareenadu Como
Turin si Tareenadu Como
Genoa Sida loo Tareenadu
Bellagio waa uun safar doon ka Como iska. Waxay caan ku tahay goobta iyo qurux. Waxaa fadhiya sareeysa waslad xagal dalkaas jajabiyaa baddii laba toortaha. Magaalada waxaa ku yaal buurta uga yaacday ilaa iyo dalabyo aragti haybad kuwa kor u socdo jidadka cobbled oo fuuli jiray luuqyo. dadka deegaanka iyo dalxiisayaal badan wac Bellagio jawharad taaj ee Lake Como ah. Dhab ahaan, waxaa loo codeeyay sida mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee Europe. Waxaa shaki la'aan waa ugu caansan iyo ugu soo booqday degaanka. Marka aad timaado, waxaad fahmi doontaa sababta. Haddii aad soo booqato Bellagio, loo hubiyo in la keeno camera a aad la. Haddii ay jirto meel ku siin doonaa sawirka kaamil ah, waxaa hubaal waa Bellagio.
Bergamo Sida loo Tareenadu
Verona si ay Tareenadu Como
3. Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como: Varenna
On xeebta bari ee Lake Como been Varenna. Inkasta oo laga yaabaa in aanay is barbar ee size si ay magaalooyinka waaweyn, weli waa waajib booqasho meel. Tani tuulada picturesque kalluumaysiga Talyaani dhaqanka waa a waa in uu arko qof kasta oo doonaya inuu ka yihiin dhaqdhaqaaqa iyo hawlaha nolosha magaalada weyn iska heli. Time u muuqataa in ay weli taagan sidii aad fadhiistaan ​​guraan iyo dheygaga biyaha buluug, iyo buuraha dul. Marka aad qaadato wax kasta oo, soc socotid, si ay u arkaan haad cobbled, picturesque kaniisadaha, iyo Villas cajiib ah Varenna. Hubi in sumaddii Villa Monastero on indhaha si aad u ogaato. Waxaa had iyo jeer ma furo dadweynaha, laakiin haddii aad tahay nasiib, waxaad arki doontaa facades-ka Talyaaniga ee soo jireenka ah iyo gudaha villa. Qaado socod iyada oo Jannooyin dheer oo dhuuban oo ka buuxa flora qalaad halka aad eegto soo baxay ee u gudubno,.
Milan in ay Tareenadu Varenna
Florence si Tareenadu Varenna
Turin si Tareenadu Varenna
Genoa si ay Tareenadu Varenna
On the bangiyada galbeed ee Lake Como, waxaad booqan kartaa magaalada quruxda badan ee Menaggio. Menaggio waa magaalo weyn oo soo jiidata badan oo views cajiib ah iyo naqshadaha u qurux badan. Isku dar ah ee ku xeeran daryaa quruxda dabiiciga ah magaalada Talyaani dhaqanka. Magaalada waxay leedahay wax badan oo ka mid ah dhismayaasha in taariikhda dib ugu qarnigii 19-ka. Piazza Garibaldi The muhiimad ahaan waa meesha isugu dhexe ee dhammaan dadka maxalliga iyo dalxiisayaasha. Waxaa jira ogaaaday ee meheradaha iyo makhaayadaha in radiate la farax iyo nolosha. Menaggio sidoo kale waa booqashadii waajib waayo, kuwii ku caashaqi jiray taariikhda a. Magaalada ayaa door muhiim ah ka horreeyay, waana kan labaad ee Wars Adduunka. maalmahan, waxaa jira tours badan oo aad qaadi karto si aad indhaha ku wareegsanaa oo la taaban karo ee degaanka.
Pavia Sida loo Tareenadu
Brescia Sida loo Tareenadu
Bologna Sida loo Tareenadu
Modena in Tareenadu Como
5. Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como: Tremezzo
Haddii aad rabto in aad la kulanto Lake Como oo ay la socdaan oo dhan raaxo iyo esthetics ee hotel a grand, markaas booqo Tremezzo. Tremezzo waa magaalo ah oo uu duubay caanka ah ee u gudubno, iyo waxa uu go'aansaday in la abuuro waayo-aragnimo u gaar ah oo raaxo leh kooxda martida ah. In kasta oo ay ka fogaadaan inay eegtaa waxay u sii dhaqanka iyo dareenka Baadida, Tremezzo weli waa magaalo la yaab leh in ay booqasho. Waa arrin u dhow Bellagio iyo waa stop ah dad badan oo doonaya in ay arkaan meel xasilloon in weli halhays qaar ka mid ah in ay a. Inkastoo hotels iyo Villas magaalada eryi badan oo soo booqda, Magaalada weli qaar ka mid ah indhaha la yaab leh. The Church of St. Maria, tusaale ahaan, waa caan ah oo ay taallo cajiib ah Madonna Nera. taas laga soo tago, waxaa jira beero suurad wanaagsan oo in marayso iyada oo wuxuu ku raaxaysan indhaha iyo dhawaaqa Lake Como.
Tortona Sida loo Tareenadu
Mantua Sida loo Tareenadu
Piacenza in Tareenadu Como
Livorno in Tareenadu Como
Kuwani waa uun 5 magaalooyinka picturesque booqashada on Lake Como. Si kastaba ha ahaatee, gudubno leedahay wax badan oo dheeraad ah si ay dalab ka badan muuqaal cajiib ah oo qurux badan magaalooyinka. Booqo Lake Como oo wuxuu ku raaxaysan hawlaha xiiso biyaha, Qorrax u dhac cajiib ah, iyo tug xiiso leh. Book A tareenka iyo sahamin Lake Como iyo yaabab ku xeeran waxaa heysta.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Picturesque Magaalooyinka Si Booqo On Lake Como” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/picturesque-towns-lake-como/ – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#LakeComo comolake europetravel eurotrip italytravel talooyin tareenka tareen safarka travelitaly
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe